ရောဘတ်တစ်ဝက်အင်တာနေရှင်နယ် - ဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းကိုင်ဂျော့ဘ်
Published by ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ at သြဂုတ်လ 15, 2018
ရောဘတ်တစ်ဝက်ဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံးကိုဝန်ထမ်းများနှင့်စုဆောင်းရေးကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခု. Highly ranked worldwide, within စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ. The Robert Half International is the world’s top-ranked company. As well as the ယူအေအီးအတွက်အကြီးဆုံးအထူးပြုဝန်ထမ်းများကုမ္ပဏီတခု။ Thes ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးရှိသမျှနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအများအပြားရှာဖွေစုဆောင်းသုံးသပ်ပြီး။ အထူးသဖြင့်ဒနယ်ပယ်များတွင် ငှားရမ်းကျွမ်းကျင်သူများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဖြစ် စာရင်းကိုင်နှင့်ဘဏ္ဍာရေးစုဆောင်းမှုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်. As well as technology and legal operations. Moreover, with this company job seekers, can အလုပ်ရှာပါ ထဲမှာ ပင်လယ်ကွေ့ဒေသ။ ဥပမာအားဖန်တီးမှု အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနယ်ပယ်များတွင်မန်နေဂျာ။ ထိုအခါအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအတွင်းမြင့်မားတဲ့ဆက်စပ်ဒီဂရီနှင့်အတူသေချာလူတို့အဘို့။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ ဤဆောင်းပါးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထိပ်တန်းအမှုဆောင်ကုမ္ပဏီအတွက်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ထိုက်တန်သည်အဘယ်ကြောင့်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားအောက်တွင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, အကျိုးစီးပွားအဘယ်ကဏ္ဍကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ ထိုသို့မှတန်ဖိုးရှိကျိန်းသေဖြစ်ပါသည် အသစ်တစ်ခုကိုအလုပ်အကိုင်အဘို့အခွင့်အလမ်းပေး. Especially in the International job market and the ယူအေအီး. According to our reviews,alot of အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများကအရမ်းစိတ်ဝင်စားအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ ငါတို့သည်အတူတူလုပ်ဖို့အခြားသူတွေလိုနေကြသည်။
ဤ ကုမ္ပဏီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျိန်းသေ 400 အတိုင်ပင်ခံထက်ပိုအတူ။ နှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူဟာအတော်ကြာအတွင်းကောင်းသောအကူအညီနဲ့လက်ခံရရှိ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်နေရာလွတ်များနှင့်နေရာများ။ ဤသည်ကိုနိုင်ငံတကာငှားရမ်းကုမ္ပဏီ 1948 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကတည်းကနိုင်ငံတကာကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ မှတစ်ခုဖြစ်သော စုဆောင်းမှုများအတွက်နမူနာ နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ staffing ။ ကျိန်းသေပင်လယ်ကွေ့ဒေသကြီးကျော်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်များအတွက်ကုမ္ပဏီရှေ့ဆောင် စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများအတွင်း။ ထိုအချိန်ကလူတိုင်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ထမ်းများန်ဆောင်မှုများ၏ concept ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကုမ္ပဏီ၏ယနေ့ rated ထိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ အမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအဆင့်ဆင့်အပေါ်သေချာသည်။ ထိုအအထူးပြုဝန်ထမ်းများန်ဆောင်မှုများအပြည့်အဝရောင်စဉ်။ ထောက်ပြကြသည် ပြည်ပမှာအလုပျသမားမြားအတှကျ။ ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံး rated အတိုင်ပင်ခံဖြေရှင်းချက်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါတံဆိပ်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်။ အဆိုပါရောဘတ်တစ်ဝက်ပေါ်ထွန်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းထိပ် 10 ကုမ္ပဏီများမှအပေါ်။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးများထဲမှ အဆိုပါ Fortune မဂ္ဂဇင်းမဂ္ဂဇင်းအတွက် Rober တစ်ဝက်။ နှင့်အလုပ်လုပ်အရှိဆုံးထင်ရှားသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြစ်လာသည်။ အတူ ယူအေအီးအတွက်ထိပ်တန်းစုဆောင်းမှုရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီများ as well as the U.S and ဥရောပ. So far reporting that over 47,000 employees working for Robert Half.
ထိပ်-အဆင့်ကုမ္ပဏီတွေဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကစာရင်းပြုစု ထိပ်တန်းငှားရမ်းအေးဂျင့်အဖြစ်။ ထိပ်တန်း ထိုကဲ့သို့သော Forbes.com အဖြစ်မဂ္ဂဇင်းများကိုလည်းဒီကုမ္ပဏီကဆက်ပြောသည်။ 1998 ဒီအံ့သြဖွယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကတည်းကထို့ပြင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ ထို့အပြင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်တကမ္ဘာလုံးပုံပေါ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့အများဆုံးကျင့်ဝတ်များ၏စာရင်းတွင်နှင့် တကမ္ဘာလုံးလုပ်ကိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသည့်ကုမ္ပဏီများ။ ဒါ့အပြင်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်ရောဘတ်တစ်ဝက်နိုင်ငံတကာကိုအကောင်းဆုံးတို့တွင်နေရာချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ no.411 ရှိခြင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းစာရင်းများအပေါ်ဥပမာ။ ထိုအ၏နာမတော်ရှိခြင်း အမေရိကားရဲ့ 2016 အတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ရှင်။ သို့သော်ငြားလည်း, ကုမ္ပဏီမသာလူတွေငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ်. The company is working along one of the top financial စီးပွားရေးလုပ်ငန်း opportunities. The company trade on the New York Stock Exchange. And that is သူတို့ရဲ့အလားအလာဘဝတစ်ဦးမြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုပေးခြင်း.
၏သင်္ကေတ ဒီအလုပ်အမှုဆောင်ကုမ္ပဏီ စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက်အပေါ် Rhi ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ဤအံ့သြဖွယ်အဖွဲ့အစည်းကို S & P 500 အညွှန်းကိန်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သေချာသည်ကသူတို့ကိုအံ့သြဖွယ်သက်ရောက်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအထိပ်အကြား, ဥပမာအားဖြင့် FTSE4 ကောင်းသောတာဝန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအညွှန်းကိန်း။ အဆိုပါရောဘတ်တစ်ဝက်ကုမ္ပဏီလည်းအများအပြားသည်အခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့မိဘအုပ်ထိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအား Protiviti တစ်ကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကအတော်လေးမဟုတ် အဆိုပါစုဆောင်းမှုကဏ္ဍတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ တစ်ဦးရှိပါတယ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီ။ ထို့အပြင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအတွင်းပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အန္တရာယ်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၏စစ်ဆေးခြင်းအဖြစ် တခြားသူတွေကိုအကြံပေးများနှင့်ငွေပေးငွေယူဝန်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
ကောင်းစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများအဆိုပါရောဘတ်တစ်ဝက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Inc ကိုအမည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သူတို့ရဲ့မန်နေဂျာများမှာ အထူးပြုန်ထမ်းများ။ နှင့်ကျိန်းသေအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ နှင့် ဝန်ထမ်းများကုမ္ပဏီများမှအတွင်းအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ အကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရှိရမည်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာမန်နေဂျာကိုအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ။ အတူ ဝန်ထမ်းများနှင့်အန္တရာယ်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများပေး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီနိုင်ငံတကာမှာကွဲပြားမှုအားဖြင့်ပြုပြင်။ ဥပမာအားများအတွက်ရောဘတ်တစ်ဝက်ဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းကိုင်စုဆောင်းမှုအပိုင်း။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်အတော်ကြာနိုင်ငံများတွင်ကြီးထွားလာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အ OfficeTeam စီးပွားရေး၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်, ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိတွင်။ ဒီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီအသုံးပြုခြင်း။ သူတို့ပြည်ပမှာပညာရှင်များများအတွက်အကောင်းဆုံးစနစ်ကရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့် စတင်ရန်အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာအဖြစ်အသစ်သောစီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ် Intern များကို။ ဒါကြောင့်, သငျသညျရှာကြသည်လျှင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများများအတွက်ပရိုဖိုင်းကိုက်ညီ။ ယူအေအီး, ဥရောပနှင့်အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရုံးခန်းများနှင့်အတူအကောင်းဆုံး-In-class ကိုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ဝန်ထမ်းများအတှေ့အကွုံခုနစ်လုံးကိုဆယ်စုနှစ်သုံးပါ။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးဖမ်းပြီး အိန္ဒိယကနေလူတို့အဘို့အခွင့်အလမ်း and move for example to ဒူဘိုင်း.
ထိပ်တန်း3ရောဘတ်တစ်ဝက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှုန်ဆောင်မှုများ
အဆိုပါကို Creative Group နှင့် Protiviti။ ok ရဲ့ဘယ်မှာ y က start ပါစေou ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးကဖန်တီးမှုအုပ်စုတစ်စုကဏ္ဍဖြစ်လိမ့်မည်။ ကကြော်ငြာအတွက်စီမံကိန်းကိုဝန်ထမ်းများထောက်ပံ့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုအချက်မှအသစ်တစ်ခုလူတစ်ယောက်အခြေခံအဆင့်မှာစတင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါအချို့သောအချို့သောကာလ၌, အဆိုပါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလယ်သို့ရွှေ့ပါ။ ထိုအခါဖြစ်နိုင်ခြေကို web design ကိုလယ်ကွင်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တက Protiviti စစ်ဆေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သငျသညျကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုပါက။ ပြည်တွင်းရေးစာရင်းစစ်များနှင့်အတူအဆိုပါအတိုင်ပင်ခံစျေးကွက်သင့်ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်အကိုင်အဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည် အဆိုပါရောဘတ်တစ်ဝက်နည်းပညာ။ အဆိုပါအတော်လေးစီမံခန့်ခွဲရန်ခက်ခဲများနှင့်သင်တန်း သငျ့လျြောသောဒီဂရီလိုအပ်။ ဤအချက်မှာအသစ်တခုအလုပ်သမားနည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များများအတွက်သတင်းအချက်အလက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လစဉ်လတိုင်းကုမ္ပဏီ၏အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာကိုစီမံကိန်းများကိုစတင်။ အသစ် ကလူကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောရာထူးများအတွက်ငှားရမ်းထားကြသည် သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံအရသိရသည်။
ငါတို့ရှိသည်သောတတိယဝန်ဆောင်မှု ရောဘတ်တစ်ဝက်စီမံခန့်ခွဲမှုအရင်းအမြစ်များ။ ဤအချက်မှာ, သစ်တစ်ခုအလုပ်သမား သို့မဟုတ်ပင်အလုပ်အမှုဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေးအထူးပြုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်နေ့စဉ်ရည်မှန်းချက်များ thru ရရှိရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအချိန်အများကြီးယူပြီးတာဝန်များကိုဒီမျိုး။ ထိုမှတပါး, အလွန်အမင်းကျွမ်းကျင်အကြီးတန်း-Level စာရင်းကိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်။ အတိအကျ သင်ပေး youalot of new business skills.
အဆိုပါရောဘတ်တစ်ဝက်ဥပဒေရေးရာ ယာယီ, စီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့ခြင်း, အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းများ ရှေ့နေများနှင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီများနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေရေးရာဌာနအတွင်းအထူးပြုထောက်ခံမှုပုဂ္ဂိုလ်များ၏။
ရောဘတ်တစ်ဝက်ဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းကိုင်ကုမ္ပဏီ စုဆောင်းရေးမန်နေဂျာ။ နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမှုဆောင်အရာရှိနေ့တိုင်းသူတို့ကိုပူးပေါင်းသေချာသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, စုစုပေါင်းအတှေ့အကွုံပျမ်းမျှ 10 နှစ်ပေါင်းဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဏ္ဍာရေးအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်း.
Project မှကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းထားနေကြသည်။ အဆိုပါရောဘတ်တစ်ဝက်တစ်ဦးသောကွောငျ့ စုဆောင်းမှုစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, ပြည်ပမှာအများကြီးလုပ်သားများဘဏ္ဍာရေးအတွေ့အကြုံရှိသည်။ နှင့်အခြားသောလက်ပေါ်, များစွာသောအလုပ်ရှာဖွေသူများတကြ် CPA နှင့် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးဖြင့်ကိုင်ထားပါ။
အကောင်းဆုံး ယာယီနှင့်အချိန်ပြည့်န်ထမ်းများအတွက်ပံ့ပိုးပေး။ သေချာများအတွက်အဆင့်မြင့်ဘဏ္ဍာရေးအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်အတူလူများအတွက်။ သူတို့ပြန်လည်စတင်နယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများအားသာချက် ပညာရှင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွေ့အကြုံကိုကူညီပါတယ်။
အဆိုပါကို Creative Group နှင့် Protiviti
ရောဘတ်တစ်ဝက်ဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းကိုင်
ရောဘတ်တစ်ဝက် Staffing အကြောင်း
ရောဘတ်တစ်ဝက်အင်တာနေရှင်နယ် ဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းကိုင်ဂျော့ဘ်များအတွက်အကောင်းဆုံး။ ထိပ်တန်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစုဆောင်းမှုတို့အတွက်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ နှင့်အကြား ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုများ ဒီကုမ္ပဏီကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏သုံးအစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့်သွားအဓိကကုမ္ပဏီန်ဆောင်မှု။ တစ်ဦးကအချိန်တိုအတွင်း နိုင်ငံတကာကဝန်ထမ်းများများအတွက်စာချုပ်များနှင့်အတိုင်ပင်ခံငှားရမ်း။ အဖြစ်ပြည်ပမှာအလုပ်သမားတွေအတွက်အမြဲတမ်းနေရာချထားန်ဆောင်မှု။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီပါဝင်သည် အဓိကပင်လယ်ကွေ့ဒေသနှင့်ယူအေအီး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, စာရင်းစစ်န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအန္တရာယ်အတိုင်ပင်ခံစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ နှင့်ကျိန်းသေ, ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုကအနာဂတျအတှကျဖွံ့ဖြိုးဆဲမှကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။
တဖန်သင်တို့တတ်နိုင်သမျှယင်း၏ဝန်ထမ်း၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အဆိုပါ LinkedIn ကျော်စစ်ဆေး။ အဖွဲ့အစည်း 1948 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ထိုအရာခပ်သိမ်းကိုစတင်သူ, သင်တန်း, ရောဘတ်တစ်ဝက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အပြုသဘောဘက်တွင် Menlo Park, ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်။ တစ်ပေးခြင်း ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်သမားတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိတွေ့မှု နှင့်အမေရိကန်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌တည်၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအမျိုးအစားတစ်ဦးအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။ 10,001 + န်ထမ်းကိုကျော်ယခုအချိန်အထိကုမ္ပဏီ၏အရွယ်အစားများ, ၎င်းတို့၏ LinkedIn ပရိုဖိုင်းကိုအညီ.
ဒါကကုမ္ပဏီကျိန်းသေဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးစစ်ဆင်ရေးမှကျူးလွန်။ ဒီကုမ္ပဏီနှင့်အတူသေချာဘို့, အသစ်တခုလူတစ်ဦးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီကုမ္ပဏီပြည်ပမှာအသစ်အလုပျသမားမြားကိုကူညီဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖို့သေချာများအတွက် အလုပ်ရှာဖွေအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ရန်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကုမ္ပဏီသင်တန်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထောက်ခံမှုမကယ်မလွှတ်ကတည်းက။ လူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးကျော်ကနေနယူးကလူစှမျးနိုငျပါ၏ တစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန်။ ဘဏ္ဍာရေး, ဥပဒေသို့မဟုတ်အခြားကုမ္ပဏီများမှ၌တည်၏။ ထို့အပြင်ဤအလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူ။ သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးလုပ်ခအထုပ်ပူဇော်ဖို့မသာမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်းဥပမာအားဖြင့်, အမှုအရာကူညီပေးနေအများကြီး, နေရာပြောင်းရွှေ့အကူအညီနှငျ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်လုပ်အခြေအနေများ။
သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းစွာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသိများသည်နှင့်အမျှ။ တစ်ဦးကအမြတ်အစွန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလမ်းကြောင်းကိုကြီးထွားလာနေတဲ့စမတ်စိတ်ကူးပုံရသည်။ သင်သည်ထိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်ပါသို့မဟုတ် join ဖို့ရှာဖွေနေလျှင်။ သူတို့၏ အတွေ့အကြုံရှိမန်နေဂျာများကအမြဲဆက်ကပ်အပ်နှံရှာနေကြသည် ပညာရှင်များ။ အများဆုံးလိုအပ်လုပ်သားအင်အား အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်မန်နေဂျာများစာရင်းကိုင်နေကြသည်။ ရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်ပါရမီပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသင်တန်း၏။ သငျသညျအများအပြားနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတစ်ဦးချင်းစီပူးပေါင်းနိုင်ပါ။ နှင့် ကျိန်းသေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်း အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲမှု။
ကိုယ့်ကိုသင်ရရှိနိုင်နေရာလွတ်ဘို့နေ့တိုင်းလျှောက်ထားရပါမည်ပြန်လည်သုံးသပ်အဆုံးသတ်။ လူမှုမီဒီယာနှင့်စံက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် သငျသညျနေရာလွတ်ရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာ သငျတို့သအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ရှာဖွေသူဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းရှိပါလိမ့်မယ်။ နှင့်စတင် နိုင်ငံတကာကိုအကောင်းဆုံးအသင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခု ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒီတော့ဒါကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ သင်ယခုရနိုင်သည် လမ်းပြအာရပ်နိုင်ငံမှအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်များ စော်ဘွား သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။